Coradia iLint Low-ịnya ụgbọ oloko Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Coradia iLint Low-ịnya ụgbọ oloko Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 21/02/2021)
Ịzụ gbaa ụgbọ okporo ígwè na Europe bụ mgbe na-akpali akpali. Na mbụ, na Save A Train anyị na-mgbe na-achọ ala-eri gbaa ụgbọ okporo ígwè n'ihi na ị. Anyị enyoba isiokwu dị ka mma hotels na mara mma ụgbọ okporo ígwè njem. Ma kacha ekpo ọkụ ugbu isiokwu na ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ bụ gburugburu ebe obibi. The Coradia Ilint is the world’s first low-riding train. ọ bụ eleghị anya ụgbọ okporo ígwè kachasị mma na gburugburu ụwa.
The Coradia Ilint bụ a hydrogen dabeere ala-na-anọkwasị ụgbọ okporo. Ọ njem n'agbata Germany na Czech Republic. The ọhụrụ ụgbọ okporo-adịbeghị anya dechara a 4-izu ule ọsọ. N'oge ule, ụgbọ okporo ígwè wee na 80 Km kwa hour. Ule na-enyocha ihe oge izu maka ụgbọ okporo ígwè. Akụkụ ndị ọzọ ka dị a na-anwale iji hụ na a ezigbo ụgbọ okporo ígwè na njem.
Nwụrụ naanị ụgbọ okporo
Traingbọ ọhụrụ ahụ bụ ụgbọ oloko mmanụ ụgbọ mmiri mbụ nke ụwa. Ọ na-eji ike eletrik maka traction. Pụtara na ọ ga-enye ihe efu anwuru naanị emitting condensed mmiri na uzuoku. The ụgbọ okporo ígwè bụ nkịtị. The Coradia Ilint ala-na-anọkwasị ụgbọ okporo ígwè nwere ndị na-esonụ pụrụ iche akụkụ;
Clean ike akakabarede
Mgbanwe ike nchekwa n'ihi batrị
Smart management nke traction ike na dị ike
Toyota gbalịrị nwekwara mejuputa a hydrogen obibia ụgbọala ha o yiri ka obibia na-arụ ọrụ na ụgbọ oloko. The ụgbọ okporo ígwè na ndokwa ẹkedori na UK na 2021. Coradia Ilint ụgbọ ala na-agba ịnyịnya ụgbọ ala malitere nke ọma na mgbakwunye na Germany na mmalite nke 2018. Ka ụgbọ oloko ahụ rụọ ọrụ, ọ chọrọ ọdụ mmanụ mmanụ hydrogen nke dị ugbu a na egwu Salzgitter.
Didier Pfleger, osote onyeisi oche nke Alstom Germany na Austria kwuru;
“Nke a ule ọsọ bụ ịrịba milestone n'ihi nke gburugburu ebe obibi-echebe ma na oru ọhụrụ”
“Ke adianade taa ọhụrụ anyị traction usoro, otú anya ọma bụ na ule mgbanaka, a na-eji na a ụgbọ okporo ígwè nke mbụ - a isi nzọụkwụ kwupụta Cleaner agagharị na Europe”
Luxembourg na Berlin Ụgbọ oloko
Akwukwo nke Maksim Tsurkov kesara (@m_tsurkov)
Na ngụkọta e nwere 14 Coradia Ilint ala-na-anọkwasị ụgbọ oloko na Europe. Ndị a ụgbọ oloko ga-eji dochie ugbu a ụgbọ oloko n'ihi na ha na-eji dizel. kasị kwesịrị ịrịba ama, okporo ígwè ndị nwere ike ekpuchi 1000 km na otu tank ịgbaju.
Anak Dongen, Omeiwu State Secretary na Federal Ministry of Transport na Digital Infrastructure (BMVI), kwuru:
“Anwuru-free, ume-oru oma na-eri-irè – trainsets na mmanụ ụgbọala cell mbanye bụ nke kacha nke environmentally friendly ọzọ ka mmanụ dizel locomotives. Iji ike na ulo oru na saịtị nke Lower Saxony, na anyị chọrọ ego LNVG si oru ngo site etinye gburugburu 8.4 nde euro. The ego na-nyere si National Innovation Program maka nwụrụ na Mmanụ Cell Technology“
Zụrụ gbaa ụgbọ okporo ígwè na Europe. Ọzọkwa, ma eleghị anya, ị na-achọ mma njem ma ọ bụ nanị ndị kasị na dị ọnụ ala ụzọ gasị na-esi na ị na-aga, anyị nwetara gị kpuchie. Enter now to Save A Train, Ọ na-ewe 3 minutes to use our search engine to get the best-valued tickets available.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fworlds-first-low-riding-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ja na / ma ọ bụ na / de na ndị ọzọ asụsụ.
#lowriding gburugburu ebe obibi ụgbọ oloko